နေဟမိ l2 | Dam Mang
အောက်တိုဘာ ၅ – ၁၁
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း အောက်တိုဘာ ၅
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၁-၂။ တရားဟော ၇း၉။ ဆာလံ ၂၃း၁-၆။ တောလည် ၂၃း၁၉။
‘ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ ငါသည်ထိုင်၍ အင်တန်ကာလပတ်လုံး ငိြုွေကးမြည်တမ်းလျက်၊ အစာရှောင်လျက်နေ၍ ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဆုတောင်းသောပတ္ထနာဟူမူကား၊ အိုကောင်းကင်ဘုံ ၏အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကြီးမြတ်၍ကြောက်မက်ဖွယ်သော ဘုရား၊ ပညတ်တော်တို့ကိုနှစ်သက်၍ ကျင့်စောင့်သောသူတို့နှင့်ဖွဲ့သော ကရုဏာပဋိညာဉ်ကိုမဖျက်၊ တည်စေသောဘုရား’ (နေဟမိ ၁း၎၊၅)။
သုံ့ပန်းအဖြစ်ပါသွားရာမှ ယုဒပြည်သို့ပြန်လာကြသောပြည်တော်ပြန် ပထမအသုတ်နှင့်ဒုတိယအသုတ်တို့၏အချိန်ကာလကို ရေတွက်မိသော်၊ ဟေဗြဲ တိုင်းပြည်အတွက် ဘုရားရှင်ထားတော်မူသောကတိတော်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြည့်စုံသွားစေခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်း ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသေးသည်။ ဖမ်းသွားချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသူများမှ နောက်ဆုံးပြန်လာသောအဖွဲ့၊ ပြဿနာ အရပ်ရပ်ကိုဖြေရှင်းရမည့်အဖွဲ့ပင်ဖြစ်သည်။
ပထမပိုင်းအသုတ်နှစ်သုတ်ပြန်လာပြီး ယေရုရှလင်ြုမိ့ကိုပြန်လည် တည်ဆောက်ရန်နှင့် ဗိမာန်တော်ကိုအပြီးသတ်ပြန်လည်ြုပပြင်ရန်ဖြစ်သော် ငြားလည်း တည်ဆောက်ခြင်းအမှုကို ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းပြည်များက ဖျက်လို ဖျက်ဆီးအနှောင့်အယှက်ပေးနေကြ၏။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှနိုင်ငံများသည် ဣသရေလလူမျိုးမျာြးုမိ့တော်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအမှုကို လုံးဝမလိုလား ကြ။ ယေရုရှလင်ြုမိ့ရိုးတစ်ဖန်ခိုင်ခံ့ပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးများအားအင် တောင့်တင်းပြီး တစ်ချိန်ကကဲ့သို့အင်အားကြီးမည်ကို အလွန်ကြောက်ရွံ့နေကြ သည်။ (ဧဇရ ၄း၆-၂၄)။ သို့အတွက်ကြောင့် ပြန်လာသောဣသရေလလူမျိုး များကိုခြိမ်းခြောက်၏။ ရည်မှန်းချက်များရပ်တန့်သွားအောင်ြုကိးစားကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏လူမျိုးကိုပြန်၍ခေါ်လာရာ၌ ရည်ရွယ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များရပ်တန့်သွားစေမည့်အခွင့်ပေးရန်အတွက်မဟုတ်၊ လုပ်ဆောင် ရန်ကိုခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ဖြင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး ကိုယ်တော်သည် မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံရန် ထပ်မံပြင်ဆင်တော်မူသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏နာမည်မှာ နေဟမိဖြစ်သည်။ သူ၏အကြောင်းနှင့်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့် ကြစို့။
တနင်္ဂနွေ အောက်တိုဘာ ၆
နေဟမိမှတ်စာကိုစတင်ရေးသားပုံမှာ ဒံယေလကျမ်းကိုစတင်ရေးသား ပုံနှင့်ဆင်တူသည်။ (ဒံယေလ ၁း၁-၂ ကိုဖတ်ပါ။) သတင်းဆိုးကြီးနှင့်စတင် ရေးသားလာသည်။ မှန်ပါသည်။ လူများစွာသည် ဘိုးဘေးများပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ဇာတိမြေသို့ ပြန်လာခဲ့ကြသော်လည်း အခြေအနေသိပ်မလွယ်ကူလှပါ။
နေဟမိ ၁း၁-၄ ကိုဖတ်ပါ။ နေဟမိသည် အဘယ်ကြောင့်အကြီး အကျယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသနည်း။ သူရရှိသောသတင်းဆိုးအပေါ် မည်သို့တုံ့ပြန် ခဲ့သနည်း။
အချို့သောဂျူးလူမျိုးများသည် နှစ်အတန်ကြာစောပြီး ရှူရှန်နန်းတော် သို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပါရှန်အင်ပါယာ၏အချုပ်အခြာ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနချုပ်လေးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနန်းတော်၌ နေဟမိ သည် ဖလားတော်ဝန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရသည်။ ‘ငါ၏ညီအစ်ကိုများထဲ မှတစ်ဦးဖြစ်သော ဟာနနိ’ ဆိုသောစကားရပ်မှာ တစ်အူထုံ့ဆင်းညီအစ်ကို အရင်းဖြစ်နိုင်ချေများသည်။ အကြောင်းမှာ နေဟမိ ၇း၂ တွင် ထိုနာမည် ကို ရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲထားသည်။ သို့သော်လည်း ဣသရေလူထဲမှ လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဟာနနိနှင့်ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သောအချိန်သည် ဘီစီ ၄၄၅၊ နိုဝင်ဘာလအလယ်နှင့်ဒီဇင်ဘာလအလယ်စပ်ကြားအချိန်တွင်ဖြစ်မည်။ ဧဇရမှယေရုရှလင်သို့ပြန်သွားပြီးနောက် (၁၃) နှစ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ဟာနနိသည် ယေရုရှလင်ြုမိ့၏သေရေးရှင်ရေးအခြေအနေကို အစီရင်ခံသည်။ ယေရုရှလင်ြုမိ့ကို လူအများပြန်လည်ြုပပြင်ရန်မတတ်နိုင်တော့ပါ။ ရန်သူများ လာ၍ြုမိ့ရိုးတို့ကိုဖျက်ဆီးကြသည်။ ယိုယွင်းပျက်စီးပြီး၊ မလုံမြုခံဖြစ်အောင်ြုပလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရှမာရိလူမျိုးများြုမိ့တော်၏ြုမိ့ရိုးကို လာရောက်ဖျက်ဆီးပစ်သည့် ကောလာဟလသတင်းများကို နေဟမိကြားကောင်းကြားရလိမ့်မည်။ သို့သော် တိကျသောအဖြေကိုမူမရရှိသေး။ ပို၍ဆိုးသည်မှာ မြစ်တစ်ဖက်မှလူတို့၏ ဝေဖန်အပြစ်တင်ခြင်းကြောင့် အာတေဇေရဇ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ြုပပြင်လက်စ ယေရုရှလင်ြုမိ့ကို ရပ်ထားရန်အမိန့်ပေးမှုကြောင့် ပြည်တော်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ ၏မျှော်လင့်ချက် ပျက်သုဉ်းကြရပြန်သည်။ (ဧဇရ ၄)။
ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်ြုပပြင်ပြီးသော်လည်း ဗိမာန်တော်နှင့်ဆိုင်သော ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ကိစ္စများသည် ယေရုရှလင်ြုမိ့၌မြုပလုပ်နိုင်သေးပါ။ နေဟမိ ၏နှလုံးသားကိုထုတ်ချင်းခတ်နာကျင်စေသည့်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဂျူးလူမျိုး များသည် ပြန်လာရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော ဘုရားဘုန်းတော်ကိုထင်ရှား စေခြင်းမြုပကြကြောင်းသတင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့် သန့်ရှင်း သြောုမိ့တော်ကိုပစ်ထားပြီး ရန်သူ၏ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်းကို ကြောက်ဒူး တုန်နေကြ၏။
သို့ဖြစ်လျှင် နေဟမိသည် အလိုအလျောက်ဘုရားရှင်ထံသို့မျက်နှာ လှည့်တော့သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနည်း၍ သူရဲဘောကြောင်သောယုဒလူတို့ကို အပြစ်မတင်၊ အခြေအနေက ထိုသို့ဖြစ်လာပြီးမတတ်နိုင်ဟူ၍လည်းသဘော မထား၊ နေဟမိသည် ဒူးနှစ်ဖက်ထောက်လျက် စတင်ပြီးအစာရှောင်ဆုတောင်း ပါတော့သည်။
သတင်းဆိုးကြီးကြောင့် နေဟမိငိြုွေကးခဲ့ရသည်။ အစာရှောင်ခဲ့ရသည်။ ဆုတောင်းခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရ သော်၊ ဘုရားသခင်ကိုတောင်းလျှောက်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
တနင်္လာ အောက်တိုဘာ ၇
နေဟမိ၏ဆုတောင်းချက်ကို (နေဟမိ ၁း၅-၁၁) ဖတ်ပါ။ ဆုတောင်း ချက်၌ ခြားနားချက်မည်သို့ရှိသနည်း။ သူ၏ကိုယ်၌က မထိုက်တန်သူဟု အဘယ်ကြောင့်ဆုတောင်းချက်၌ထည့်သွင်းထားရသနည်း။
၁။ ကြီးမြတ်၍ကရုဏာပဋိညာဉ်ကိုမဖျက် (နေ ၁း၅)
၂။ အကျွန်ုပ်ကိုနားထောင်ပါ (နေ ၁း၆)
၃။ အပြစ်ကိုဝန်ချခြင်း (နေ ၁း၆၊၇)
၄။ ကတိတော်ကိုအောက်မေ့ပါ (နေ ၁း၈၊၉)
၃။ ကိုယ်တော်ရွေးနုတ်တော်မူသော (နေ ၁း၁၀)
၂။ အကျွန်ုပ်ကိုနားထောင်ပါ (နေဟမိ ၁း၁၁)။
၁။ ထာဝရဘုရားသည်ြွကယ်ဝခြင်းနှင့်ကရုဏာတော်ကိုချပေးတော်မူသည် (နေ ၁း၁၁)
နေဟမိ၏ဆုတောင်းချက်၌ ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကို လှပစွာပြန်လည်ရေတွက်နေသည်။ လူမျိုးတို့၏အပြစ်များလှကြောင်းကိုဝန်ခံ ကာ၊ မစတော်မူပါရန်ဖြင့် ဆုတောင်းချက်ကိုအဆုံးသတ်သွားသည်။ ဆုတောင်း ချက်မှာ ဒံယေလအခန်းကြီး (၉) ၌၊ ဒံယေလ၏ဆုတောင်းချက်ကိုပင် ပြန်၍မူနာယူတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နေဟမိသည် ယင်းဆုတောင်း ချက်မျိုးနှင့်ရင်းနှီးခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဆုတောင်းချက်စသည်နှင့် နေဟမိ သည် အကူအညီမစခြင်းတောင်းခံရန်မထိုက်တန်ပါ။ ထာဝရဘုရားရှင်သည် မည်သို့ရှိကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းဦးစွာဖွင့်ဟရသည်။ ကြီးမြတ်တော်မူကြောင်း ကိုြွေကးကြော်ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထားရှိသောပဋိညာဉ်၌တည်၍ ကိုယ်တော်ကိုချစ်သောသူတိုင်းအပေါ် ကရုဏာတော်သွန်းလောင်းပေးကြောင်း ကိုလည်းဖော်ပြသည်။ ထာဝရဘုရားသည် သစ္စာနှင့်အစဉ်တည်တော်မူကြောင်း တုန်လှုပ်ယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကို လှပစွာရွတ်ဆိုခဲ့သည်။
ဆုတောင်းချက်၌ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အခန်းငယ် (၈) ကိုဗဟိုထားသည်။ ဘုရားရှင်၏ကတိတော်အကြောင်းကို ပီသစွာရွတ်ဆိုသွားသည်။ နေဟမိဆိုခဲ့သောဆုတောင်းချက်၌ ‘အောက်မေ့ တော်မူပါ’ တစ်နည်းဆိုရသော် ‘အရှင်ဘုရားအောက်မေ့တော်မူပါ။’ ကိုယ်တော် ၏ကတိတော်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သစ္စာပျက်လျှင် ကိုယ်တော်စွန့်လွှတ်တော် မူမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်၍အထံတော်သို့ခေါ်တော်မူမည့်ကတိတော် လည်းရှိ၏။ ရှေ့အရာသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ ယခုအခါတွင် ကိုယ်တော်ထံသို့ အကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာပါပြီ။ နေဟမိသည် ဘုရားရှင်၏ကတိတော်ကိုတောင်းခံ ရန် ကြောက်ရွံ့စိတ်မရှိပါ။ ဘုရားရှင်ကိုကတိအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါရန်လည်း သတိပေးရဲ၏။ မှန်သည်၊ ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ကတိကိုမသိ၍မဟုတ်၊ မေ့လျော့နေ၍လည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်ခြင်းကို ဘုရားရှင် နှစ်သက်တော်မူ၏။ ထိုကတိများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေသည်ကို ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျယ်စွာဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုတောင်း လျှောက်စေလိုသည်။ နှုတ်အားဖြင့် ဘုရားရှင်မည်သည့်ကတိတော်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုးစားယုံကြည်လျက်၊ ထိုကတိတော်များအပေါ် ခွန်အားယူကြရမည်။ အထူးသဖြင့် အရာခပ်သိမ်းမျှော်လင့်စရာလမ်းမရှိသောအချိန်မျိုးတွင် ကိုးစား ယုံကြည်လျက် ကတိတော်ကိုရေရွတ်ပြီးတောင်းလျှောက်ပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်ယခုတောင်းယူရန် မည်သည့်ဘုရားရှင်၏ကတိတော် မျိုးရှိနေသနည်း။ ဇွဲမလျှော့တမ်း၊ မရမချင်းတောင်းယူရန် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။ (သင်လက်လျှော့ခဲ့မိသော် သင့်အတွက်မည်သည့် အကျိုးရှိမည်နည်း။)
အင်္ဂါ အောက်တိုဘာ ၈
နေဟမိ ၁း၁၁ ၌ နေဟမိသည် ဘုရင်ကြီးသောက်သောခွက်ဖလား ကို စီစဉ်ဆက်သပေးသူဟုဖော်ပြသည်။ ခွက်ဖလားကိုင်ပြီး ယူလာပေးရခြင်း အလုပ်သည် အရေးမပါလှသောအလုပ်ဟု လူတို့ထင်မှတ်ကြ၏။ သို့သော် ငြားလည်း မင်းကြီးသောက်ရန်စီစဉ်ယူလာသောသူသည် ဘုရင်ကြီး၏လူယုံ နန်းတွင်းဩဇာရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ရမည်။ ဘုရင်မင်းကြီး၏ကျန်းမာရေးအတွက် မထိခိုက်စေရန်၊ အဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိစေရန် ရှေးဦးစွာဖလားတော်ကိုင်မှမြည်းစမ်း ပြီး အရသာပြည့်မပြည့်ကိုစီစဉ်ပေးရသည်။ ဟီရိုဒိုးတပ်သည် ပါရှန်အင်ပါယာ ကောင်းစားစဉ်အချိန်က ဖလားတော်ဆောင်ရာထူးကို အလွန်အလေးထား ဂုဏ်ြုပပေးသည်။ အထက်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးရာထူးအတန်းအစား၌ သတ်မှတ် ပေးထားသည်။ အာရှုရိမင်းကြီး ဟီရှာဟာဒုန်သည်လည်း ဖလားတော်ကိုင် သူကို နိုင်ငံတော်၏ဝန်ချုပ်ရာထူးကိုပေးထားကြောင်း လေ့လာရသည်။ ထိုသို့ကြောင့် နေဟမိသည် ပါရှန်နိုင်ငံ၌ မြင့်သောရာထူးကြီးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထား ခြင်းမှာ ဘုရင်မင်းမြတ်၏မျက်နှာသာပေးခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယုဒနိုင်ငံ ၏ရှိနေမှုအခြေအနေကို ဘုရင်အားပြောပြနိုင်ရန် ဘုရားသခင်ကိုနေ့စဉ် ဆုတောင်း၏။
နေဟမိ ၂း၁-၈ ကိုဖတ်ပါ။ နေဟမိ၏ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင် ခြင်းကြောင့် မည်သည့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိသနည်း။
ဆုတောင်းခြင်း၏အဖြေကို နိဆန်း (Nisan) လ၊ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လအားဖြင့် (ဧပြီလလောက်) ဘီစီ ၄၄၄ တွင်ရရှိခဲ့သည်။ စိတ်ပျက် စရာ ယေရုရှလင်ြုမိ့အကြောင်းကို အာနနိနှင့်အခြားဂျူးလူမျိုးများ နေဟမိ ထံသတင်းပေးချိန်မှစ၍ အချိန်လေးလကြာညောင်းခဲ့သည်။ နေဟမိဆုတောင်း ခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းလေးလကြာမြင့်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ဆုတောင်းနေခဲ့သော် လည်း ဘုရားသခင်မှဂရုမစိုက်သည့်ပုံစံပေါက်နေသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရာသခင်၏အချိန်သည် အစဉ်အမြဲအံကိုက်ဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ရှင်ဘုရင်၏နှလုံးသားကိုတို့ထိပြီး နေဟမိပြောသမျှကိုသဘောတူရန်၊ အခွင့် ပေးရန် ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သည်။
ဘုရင်မင်းကြီး၏ခွက်ဖလားကို စီစဉ်ကိုင်ဆောင်ပေးနေရသော ဖလား တော်ကိုင်တစ်ဦးသည် သာမန်အားဖြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီး အခြားဒေသ၌ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရတစ်ဦးဖြစ်ရန်မလွယ်ကူလှပါ။ ဘုရားသခင်သည် နေဟမိကို စကားပြောစေခြင်းဖြင့် အာတေဇေရဇ်မင်း၏စိတ်ကိုနိုးဆော်ကာ၊ ယုဒတိုင်း ဒေသတစ်ခွင် နယ်စားကြီးရာထူးကိုပေးစေပါသည်။ မိဖုရားသည် မည်သို့ သောအခါမျှသီးသန့်အချိန်တွင် အကြံဥာဏ်ဝင်ရောက်ပေးခွင့်မရှိ။ ထုံးစံဓလေ့ အရ၊ ပွဲတက်ခြင်းနှင့်စားပွဲသောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိတတ်။ နေဟမိ သည် ယေရုရှလင်ြုမိ့၏အကြောင်းကို အလျင်စလိုပြောခြင်းမြုပခဲ့ပါ။ ဘုရင်၏ အခြေအနေ၊ အနေအထားကိုသုံးသပ်ပြီးမှ ဘုရင်ကြီးစိတ်နှလုံးရွှင်လန်းသော အချိန်ကိုရွေးကာ နှစ်ကိုယ်ကြားပြောကြားရသည်။ ဘုရင်ကြီးအောင်မြင်မှုရ သောအချိန်၊ နေရာမျိုးတွင်မှ ပြောထွက်ခဲ့ရသည်။
နေဟမိ၏အနေအထားအခွင့်အခါနှင့် ဒံယေလဗာဗုလုန်၌ရှိစဉ်အနေ အထားအခွင့်အခါကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ပါ။ နေဟမိ၏စာရိတ္တကိုသဘောကျ ပြီး ဘုရင်ကြီးမှမြှောက်စားရသောအချက် မည်သို့ရှိသနည်း။
ဗုဒ္ဓဟူး အောက်တိုဘာ ၉
ဘုရင်မင်းကြီးသည် အမိန့်စာနှင့်အတူနေဟမိကို ဟောရနိလူ သမ္ဘာလတ်နှင့် ကျွန်ခံသူအမ္မုန်အမျိုးသားတောဘိဆီသို့စေလွှတ်လိုက်သည်။ ထိုသူတို့သည် မြစ်တစ်ဖက်ရှိနယ်မြေကို အပိုင်စားရသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအမိန့်စာပါရှိချက်မှာ နေဟမိသွားရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လြုံခံစိတ်ချ မှုရှိရန် ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်လိုသမျှကိုကူညီပေးခြင်းတို့ပါရှိသည်။ ရှင်ဘုရင် ၏သစ်တောကိုအုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲရသော သစ်တောဝန်ကြီးအာသပ်ကိုလည်း နေဟမိယေရုရှလင်ြုမိ့ကိုတည်ဆောက်ရန် နံရံများ၊ ဗိမာန်တော်တံခါးပေါက် များအတွက် အလိုရှိသမျှသစ်တုံး၊ သစ်သား၊ သစ်ပြားများကို လိုလေသေး မရှိစီစဉ်ပေးရန်အမိန့်ချပေးသည်။
နေဟမိ ၂း၉ ကိုဖတ်ပါ။ နေဟမိနှင့်ဂျူးလူမျိုးမျာြးုကံတွေ့ရင်ဆိုင် ရသော ဆန့်ကျင်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှုများသည် သာမန်အားဖြင့် မည်သည့် အကြောင်းများဖြစ်သနည်း။
နေဟမိသည် ယေရုရှလင်ြုမိ့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသောခုနှစ်မှာ ဘီစီ ၄၄၅/၄၄၄ ဝန်းကျင်၌ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှု၊ တိုက်ခိုက် မှုများ နေဟမိကိုအဆင်သင့်ဝန်းရံထားနေသည်။ နယ်ပိုင်နယ်စားများထံ အဆို တင်သွင်းတောင်းလျှောက်မှုတိုင်းသည် ပြဿနာဖြစ်လာသည်။ ‘တောဘိ’ ဟူသည့်နာမ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ထာဝရဘုရားရှင်သည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၏’ ဖြစ်သည်။ ဂျူးဝေါဟာရဘာသာစကားဖြစ်သည်။ (သူ၏သား ‘ယောဟနူန်’ ၏အမည်သည်လည်း ယုဒဘာသာစကားဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားသည်။) အဓိပ္ပါယ် မှာ ‘ဘုရားရှင်သည် ကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။’ အမ္မုန်ြုမိ့စားကြီး၏အမှု ကိုထမ်းရွက်သူဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယေရုရှလင်ြုမိ့တော်သည် ရန်သူများပတ်ပတ်လည်ဝန်းရံလျက်ရှိသောအနေအထားမှာရှိသည်။ သမ္ဘာလတ်မြောက်ပိုင်းရှမာရိ၏နယ်ပိုင်ကြီးဖြစ်သည်။ တောဘိ- အမ္မုန်နယ်၏အရှေ့ ပိုင်းကိုစားရသောနယ်စားကြီးဖြစ်သည်။ ဂေရှင်- အာရပ်အမျိုးသား (နေဟမိ ၂း၁၈၊၁၉) တောင်ဘက်တွင်နေထိုင်၍ ယေရုရှလင်ြုမိ့တည်ဆောက်ခြင်းကို ဒုက္ခပေး၏။ ဧဒုန်ပြည်နှင့်မောဘပြည်ကိုအပိုင်စားရထားကာ အုပ်ချုပ်စိုးစံသူ ဖြစ်သည်။ ထိုဖိအားများကြောင့် ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်များပင်လျှင် နေဟမိ ကိုကူညီမစရန် ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်ြုပနေကြသည်။ ပတ်ချာလည်မှအင်အား ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြ၏။
နေဟမိသည် ယေရုရှလင်ြုမိ့သို့ စစ်တပ်ကြီးနှင့်အစောင့်အရှောက် များရောက်လာသည်။ အရေးပါသောကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဧက္ကရာဇ် မင်းကြီးမှလွှတ်လိုက်သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ြုမိ့တော်အနီးတစ်ဝိုက်နေထိုင်သော တစ်ပါးအမျိုးသားများအဖို့ မနာလိုသဝန်တိုစေသောမြင်ကွင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းလူမျိုးများသည် ဂျူးလူမျိုးကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်လုယက်ဒုက္ခပေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ လုယက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဦးဆောင်သူများမှာ ဟောရနိအမျိုး သမ္ဘာလတ်၊ အမ္မုန်အမျိုးသားတောဘိနှင့် အာရပ်လူမျိုးဂေရှင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် နေဟမိ၏လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို မျက်ခြည်မပြတ် ဒေါက်ထောက် ကြည့်ရှုပြီး ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးရန်၊ အားအင်ချည့်နဲ့သွားရန် အမြဲကြံစည် လုပ်ဆောင်၏။’ (Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 635).
သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူပြီး၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက် ခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတလေအကြောင်း သင်သိရှိပါသလား။ အတန်း သားများကိုဝေငှပြောကြားပေးပါ။
ကြာသပတေး အောက်တိုဘာ ၁၀
ဘုရားရှင်သည် နေဟမိကိုခေါ်တော်မူ၍ လိုအပ်သမျှကိုစီစဉ်ပေး ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိရန်မလိုပါ။ ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို အသိ ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ ကိုယ်တော်၏ခေါ်တော်မူခြင်းကို ရဲရင့်စွာလက်ခံသည်။ သို့သော် ငြားလည်း ရှေ့သို့တိုးသောအမူအရာတိုင်းတွင် သတိပညာအသိဥာဏ်ကိုမလွှတ်၊ ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုအထူးစွဲကိုင်ကာ ရှေ့သို့ဆက်လှမ်းသည်။ တစ်နည်းဆိုရ သော် ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်အတူရှိနေကြောင်းကိုသိနေသည့်တိုင် ထိုသိနေ သည့်အရာကပင် သူ့အားကျေနပ်မှုကိုမဖြစ်စေသေး၊ မည်သို့ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန်ကို သာ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်၏။
နေဟမိ ၂း၁၁-၂၀ ကိုဖတ်ပါ။ ယေရုရှလင်ြုမိ့ကိုပြန်လည် တည်ဆောက်ရန်အတွက် နေဟမိသည် မည်သို့စီမံကိန်းချမှတ်လုပ်ဆောင် သနည်း။
ခေါင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာ။ သင်ခန်းစာ (၁)- နေဟမိသည် စိတ်ထဲရှိ သောအကြံအစည်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှထုတ်ဖော်မပြောဘဲ စိတ်ထဲ၌သာထား၏။ ‘ငါ၏ဘုရားသခင်သည် ငါ့အားအဘယ်သို့အကြံပေး သည်ကို အခြားသောသူတစ်ယောက်အားမျှမပြော’ (နေဟမိ ၂း၁၂)။ မိမိ၏ အကြံအစည်ကို ရန်သူများအားအသိမပေးသည့်အပြင် ယုဒအကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်များကိုပင်လျှင် အသိပေးခြင်းမရှိပါ။ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်မှုကို၊ ထောက်လှမ်းမှုကြိုပသည်။
သင်ခန်းစာ (၂)- ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာကိုမြုပလုပ်မီ ထုတ်ဖော်ပြော ခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဦးတည်းအစီအစဉ်အကွက်ကျကျရေးဆွဲထားသည်။
သင်ခန်းစာ (၃)- တာဝန်ပိုင်းနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းကိုပြောလာ ရာတွင် နေဟမိသည် မိမိဆွဲထားသောအစီအစဉ် ဘုရားရှင်၏ပို့ဆောင်တော် မူမည့်အကြောင်းကို ဦးစွာဦးစားပေးတင်ပြသည်။ ယင်းနောက်တွင် ဘုရင် မင်းကြီး၏အမိန့်တော်အကြောင်းကိုပြောကြားသည်။ လူအများဆက်ကပ်ရန် အတွက်မတောင်းဆိုမီ အားပေးစကားကို အလျင်ဦးစွာပြောကြား၏။ ယုဒလူ တို့သည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မည်သည့်ရောက်လာမည့်တားဆီးနှောင့်ယှက် မှုကိုမျှမမှုတော့ဘဲ တည်ဆောက်ခြင်းအမှုကြိုပလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ စိတ်သန္နိဌာန်ချလိုက်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် နေဟမိ၏ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းကြောင့် ရှင်ဘုရင်၏စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးရုံမကဘဲ ယုဒလူမျိုး များတို့၏ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိကိုလည်း ထပ်မံပြင်ဆင်ပေး၏။
နေဟမိ ၂း၁၉၊၂၀ ကိုဖတ်ပါ။ နေဟမိ၏ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း ကို မည်သို့ဖော်ပြသနည်း။ တရားဟော ၇း၉။ ဆာလံ ၂၃း၁-၆ နှင့် တောလည် ၂၃း၁၉ စသည့်တရားဟောချက်သည် နေဟမိအတွက်မည်သို့ အထောက်အကြူုပစေနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောစကားဆိုသောစကားသည် ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ ယုံကြည်နေထိုင်ပုံကိုပြသနေသည်။ နေဟမိသည် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်းစကား များကိုပြောဆိုသည်။ စကားပြောဆိုတိုင်း ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန် ကြောက်ရွံ့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါ။ လူအများပြက်ရယ်သရော်ရယ်မောခြင်းကို ခံရသည့်တိုင် လုံးဝမရှက်ကြောက်ပါ။ ရန်သူများသည် သူတို့ကိုအထင်အမြင် သေးကြောင်းကို နေဟမိသိသော်ငြားလည်း စကားပြောဆိုသောအခါတိုင်း လေသံပျော့သောစကားမျိုး၊ ဘုရားကိုမေ့လျော့သောစကားမျိုး လုံးဝပါးစပ်ဟ ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ၌ ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားယုံကြည်လျက် ချီးမြှောက်သကဲ့သို့ နေဟမိသည်လည်း ဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်ရန် မရှက်မကြောက်တတ်။ ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူ၊ ထာဝရဘုရားအကြောင်းမကြားဖူးသူ၊ မယုံကြည် သူများအကြား၌ ကိုယ်တော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းအစဉ်ြုပလုပ်၏။
သောကြာ အောက်တိုဘာ ၁၁
ပုရောဖက်နှင့်ဘုရင်များစာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၆၂၈-၆၃၄ ပါ “A Man of Opportunity” အကြောင်းကိုဖတ်ရှုပြီး ချင့်ချိန်စဉ်းစားပါ။
နေဟမိသည် ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို ဦးစားပေးသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နေဟမိသည် မိမိ၏လူမျိုးအတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆုတောင်းခြင်ြးုပသောအခါ သန့်ရှင်းသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု သူ၏စိတ်ထဲ ဝင်လာသည်။ ရှင်ဘုရင်၏ခွင့်ြုပမိန့်ကိုသာရရှိခဲ့လျှင် သူ၏လူမျိုးအတွက်နှင့် ယေရုရှလင်ြုမိ့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပစ္စည်းပစ္စယတန်ဆာပလာနှင့် လိုအပ်သမျှကိုရရှိပြီး ယေရုရှလင်ြုမိ့နှင့်ဣသရေလလူမျိုးများလည်း ပြန်လည် ခိုင်မာတောင့်တင်းလာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ဘုရားရှင်ကို ဘုရင်မင်းကြီး ၏စိတ်အားတို့ထိစေရန် သူဆုတောင်း၏။ သူ၏အကြံအစည်ထမြောက် စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ‘ကိုယ်တော်ကျွန်ကို ယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ ဤလူရှေ့မှာမျက်နှာရမည်အကြောင်း ကယ်မသနားမူပါ’ ဟု နေဟမိဆုတောင်း သည်။ နေဟမိသည် ဆုတောင်းနေရင်း ရှင်ဘုရင်ထံမှအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆို ရန် အချိန်လေးလစောင့်ခဲ့ရသည်။ Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 629, 630.
Taggedlesson24q19myanmar ssl
Previous Article NEHEMIA l2
Next Article Cooking Method